सिद्धार्थको निधनमा वि’क्षि’प्त बनेकी शहनाज कसका लागि बनिन् वेहुली ? फ्यानले यस्ता तस्बिर देखेपछि उठाए प्रश्न (भिडियो हेर्नुस्) – Online Khabar 24
सिद्धार्थको निधनमा वि’क्षि’प्त बनेकी शहनाज कसका लागि बनिन् वेहुली ? फ्यानले यस्ता तस्बिर देखेपछि उठाए प्रश्न (भिडियो हेर्नुस्)
पञ्जाबकी कट्रिना कैफ र बिग बोस १३ फेम शहनाज गिल बिस्तारै सामान्य जीवन बिताउने प्रयासमा अगाडि बढिरहेकी छन् ।
शहनाज आफ्नो निकटतम साथी सिद्धार्थ शुक्लालाई अचा’नक गुमा’उनु पर्दा निकै दुखी भएकी थिइन् तर केही समय ब्रेक लिएपछि शहनाज फेरि सबै काम सम्हा’ल्दैछिन् ।
शहनाज गिल दुलही बनेकोमा फ्यानले प्रश्न उठाएका छन् । हेर्नुस भिडियो
यो भिडियोमा शहनाज निकै सुन्दर देखिएकी छिन् । फ्यानले पनि उनको निकै तारिफ गरेका छन् तर सोसल मिडियामा केही प्रयोगकर्ताहरु यस्ता छन् जसलाई ट्रो’ल गर्ने बानी छ । यस्तो अवस्थामा धेरै प्रयोगकर्ताले शह’नाजलाई ट्रो’ल गर्न थाले । सनाको ब्राइडल अवतार देखेर धेरै प्रयोगकर्ताहरू रिसाए र शहनाजलाई नि शा ना बनाउन थाले।
वास्तवमा प्रयोगकर्ताहरू भन्छन् कि सिद्धार्थको मृ’ त्यु भएको केही समय मात्र भएको छ र शहनाज कसरी यसरी खुसी हुन सक्छिन्। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन् कि शहनाजले सिद्धार्थलाई माया गर्थिन, त्यसपछि उनको मृ’ त्युको केही समयपछि कसरी यस्तो ‘दुलहीको रूपमा देख्न सकिन्छ ?
सिद्धार्थ शुक्लाको भदौ २ गते हृ’दयघा’तका कारण अचा’नक नि’धन भएको थियो । जब मात्र ४० वर्षको उमेरमा सिद्धार्थले अचानक यो संसा’र छो’डे, सबै छ’क्क परे । यो खबरले शहनाजलाई निकै नरा’म्रो अ’सर पारेको थियो । उनका धेरै भिडियो र तस्विर पनि भाइरल भएका छन्, जसमा उनी एकदमै पा’ग’ल देखिएकी छिन् ।
शहनाजका परिवारका सदस्य र नजिकका साथीहरूले सिद्धार्थको अ’न्त्ये’ष्टिपछि शहनाजले न ‘त खाना खाइरहेका थिए न त राम्ररी सुति’रहेको बताए। बिस्तारै अब उनी आफ्नो काममा फर्किएकी छिन् र आफ्नो व्यावसायिक प्रतिबद्धता पूरा गर्दैछिन् तर प्रयोगकर्ताहरुले उनलाई अनावश्यक रुपमा ट्रो’ल गरिरहेका छन् ।
शहनाजको यो भाइरल भिडियो पनि निकै पुरानो हो । हाल शहनाज आफ्नो कमेडी फिल्म ‘हौंसला रख’ को प्रमोशनमा देखिएकी छिन् । यस फिल्ममा उनको नायक दिलजीत दोसाँझ हुन् । यससँगै केही समयअघि सिद्धार्थ र शहनाजको ह्याबिट भिडियो पनि रिलिज भएको थियो, जसमा सिद्धार्थलाई अन्तिम पटक देखेर फ्यानहरु निकै भावुक भएका थिए । खबर नेपालीबाट साभार गरियको । भिडियो ,
Prevगायीका मधु क्षेत्रीले भनिन् हो म प्रेममा छु , उहाको परिवारले मलाई धेरै माया गर्नु हुन्छ (भिडियो हेर्नुहोस्)
nextधर्ती माताले फेरी गरिन नेपालको ड रलाग्दो भबिस्यवाणी – राजा, रबि र देश, २०७८ मा यति ठुला ख’त’राहरु आउदै छन्, बा’ढी प’हिरो ? हेर्नुस के के ?